Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-pandrindrana ny rômanina Kahlil Gibran: Talenta momba ny literatiora taloha - Fikarohana momba ny vatana teraka
Tranom-pitaovam-pandrindrana ny rômanina Kahlil Gibran: Talenta Taloha momba ny literatiora taloha
Posted by: Walter Semkiw, MD
Rehefa nanontaniako i Ahtun Re raha Rumi Niverina indray izy, dia namaly avy hatrany izy tamin'ny nilazany ahy fa ny rômanina dia efa tafiditra indray Kahlil Gibran.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Misy ny fitoviana eo amin'i Rumi sy Gibran.
Ny fiainana taloha talenta: Rumi sy Gibran no heverina ho toy ny sasany tamin'ireo mpanoratra lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny olombelona. Izy ireo dia poeta, teolojiana ary mystika.
Fiovan'ny Fivavahana, ny Nationality ary ny Fiaraha-monina Ethique avy amin'ny Fahatongavana ho nofo iray ho an'ny hafa: Teraka tamin'ny taonjato faha 13 tany Persa i Rumi, izay nisy an'i Iran androany. Izy dia poeta Miozolomana, teolojiana ary Sufi mystika.
Kahlil Gibran dia teraka tao 1883 ho an'ny fianakaviana Kristiana any Libanona. Nifindra tany Etazonia i Gibran sy ny fianakaviany tao 1895. Izy no malaza indrindra amin'ny tontolo tandrefana ho an'ny bokiny, Ny Mpaminany.